Aluminium Warshadda Tread Plate - Shiinaha
Aluminium Dheemanka Aluminium 3003-H22 way fududahay in la been abuuro oo qaabkeeda dheemanka ee kor u kacay wuxuu bixiyaa iska caabin siibid wanaagsan iyo degganaansho socod. Codsiga iyo adeegsiga saxanka dheemanka Aluminium 3003-H22 dhalaalaya ayaa ah: isticmaalka badeecadda oo aad u badan sida taargooyinka wax lagu xoqo, looxyada ordaya, iyo daboolka dhoobada ee matoorada dabka, ambalaasyada, baabuurta dab-damiska, isjiidka iyo sanduuqyada aaladda, madadaalada, iyo baabuurta afar-taayirrada leh.
Taarikada la jeexjeexay/lagu tuntay xaashida aluminiumka oo leh naqshad gaar ah iyo iska caabin siibid aad u sareysa ayaa si sahlan loogu qaabeyn karaa naqshado iyo qaabab kala duwan sida uu rabo macmiilka. Taarikada la hubiyay ee aluminiumka waxaa lagu bixin karaa qaabab kala duwan oo ah alaabada la dhammeeyay oo ay ku jiraan taargooyinka dheemanka, taarikada la hubiyay ee aluminiumka, taarikada tuman iyo jaranjarada jaranjarada.
Lahaanshaha sameynta wanaagsan, qodista iyo kartida alxanka, Aluminium Dheemanka Aluminium waa fududahay in la been abuurto oo qaabkeeda lugaha dheemanka sare leh waxay bixisaa iska caabin simbiriirixan oo wanaagsan. Waxaan hadda ku keydineynaa cabbirro xulasho ah FTQ ama Taallada Dheemanka Tayada Gawaarida Dab -damiska oo leh jeex -jeexyo ku dhegan dheemanka sare si loo sii jiido.
Faahfaahinta Gudiga Aluminium
Si loo daboolo baahiyaha dadka ku jira dhismayaasha noocyadiisa kala duwan, naqshadaha xirmooyinka aluminiumku sidoo kale way kala duwan yihiin. Marka lagu daro midabada kala duwan ee rinjiyeynta aluminiumka, waxaa kale oo jira daaweyn kale oo badan oo ka samaysan aluminium iib ah.
Acp aluminium guddi isku dhafan waa dahaarka dhismaha aluminium weyn. Sida nooc cusub oo ah alwaaxyada dhismaha aluminium, qiimaha xaashida aluminiumku aad ayuu uga hooseeyaa, midabada guddiyada aluminiumku way kala duwan yihiin, maaddadani sidoo kale waxay leedahay wax -qabad aad u fiican. Waxaa ka sii muhiimsan, alwaax ka kooban aluminium wuxuu leeyahay iska caabin dab oo aad u fiican iyo tayo sharaf leh.
Darajada Ganacsiga Saxanka Aluminium waxaa lagu bixiyaa Cabbirro kala duwan, Codsiyo kala duwan. Wanaagsan Guri ama Xafiis, iyo dhisme, soo -saareyaal la been -abuuray, Darajada Daawaha Kala -duwan ayaa la heli karaa
Dahabka Tread Diamond Slip-Resistant Factory Sheets Aluminum
Taxanaha 1000 aluminium aluminium waxaa sidoo kale loo yaqaan “aluminium saafi ah oo warshadeed”, kaas oo adeegsigiisa ugu ballaadhan dhulal badan, sida warshadaha, dhismaha, dhismaha qurxinta, badda, diyaaradaha, iwm. conductivity korontada wanaagsan. Habka tilmaamida daawaha aluminiumku wuu badan yahay waxaana lagu samayn karaa burush, la safeeyey, daabacaad, la huwiyey, la cadaadiyey, jiingad ama alaab kale oo aluminium ah.
Resistance heer sare ah Birta Aluminum Checkered Birta
Saxanka tuman ee aluminium waxaa loo isticmaali karaa dhismayaal iyo ujeedooyin dhismeed balaaran. Tani waa sababta oo ah miisaankeedu yar yahay, raagaya, tayada dayactirka oo hooseeya. Taarikada Hubinta Aluminiumka waa guddi bir ah oo culeyskiisu yar yahay oo loo adeegsado qaab dhismeedyo looxyo lagu qurxiyo.